I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yebhola leGoli eliyaziwa kakhulu ngegama elithi "ongasanyakazi". Indaba yethu ye-Ciro Immobile Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okuqedela okuhle kodwa abambalwa abheka i-Bio Ciro Immobile eyithandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
Ukuqala, uCiro Immobile wazalwa ku-20th usuku lukaFebruwari 1990 ku U-Torre Annunziata, e-Italy. Wazalelwa nguyise u-Antonio Immobile nakumama wakhe uMichela Immobile.
Ukukhula edolobheni lakubo (Torre Annunziata okufanekisiwe ngezansi) elisezingeni eliphansi Mount Vesuvius, isimo sengqondo esincane se-Immobile sokudlala ibhola sanikeza abazali bakhe isizathu sokukhathazeka ngesakhiwo sabo sokwakha.
Ukukhathazeka kwabo kwakuncane kakhulu ukuqhuma kwentaba evulekile INtaba iVesuvius eye yachitha kabili idolobha lika-Annunziata. Ngokuyinhloko wagxila ekuthambekeni okulimazayo kwe-Young Immobile ukuguqula izindawo zabo zokuhlala nezindlu zokulala endaweni eqenjini lebhola lapho athatha khona isibhamu ngokushiya okungenasici.
I-quirks ye-Immobile ebuntwaneni nayo yaphakamisa ukukhathazeka ngokuphepha komfowenu omncane, uLuigi owayevame ukubekwa ukuze athole lezo zibhamu, intuthuko eyayingeyona nje eyingozi empilweni yengane kodwa nayo ingamthonya ukuba ahambe endleleni eyingozi yomfowabo omdala.
Kungakabiphi ngaphambi kokuba abazali baka-Immobile baqaphele ukuthi indlela engcono kakhulu yokulondoloza ikhaya labo ekubhujisweni kwakuwukunikeza uthando lwezingane zabo ngokwanele ukuthi babhalise esikoleni samabhola, uTorre Annunziata '88 ngesikhathi eseneminyaka engu-5 kuphela.
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Udumo oluya emgwaqeni
Immobile wenza iminyaka elandelayo ye-5 yokuphila kwakhe kuTorre Annunziata '88 lapho ehlonipha khona amakhono akhe okudlala ibhola ezindaweni zokuqedela okunembile. Imisebenzi yakhe emnandi yamqinisekisa ukuba ahambe eSerrento Calcio (ngemuva kokuhlukumezeka ukuzihlanganisa nezinkampani zentsha ye-Empoli neSalernitana) lapho ehola khona imigomo ye-30 esikhathini se-2007-08.
Okuphawulekayo phakathi kwebhola lezinyawo ze-Immobile elisanda kulandela ukuhamba kwakhe kuJuventus ku-2008. Ukudlala ohlangothini lwe-U19 eqenjini lentsha, ifomu le-Immobile top goalscoring fomu liphule irekhodi likaRenzo Cappellaro lokuqopha iminyaka engu-50 kanye nokwenza i-Serie A yakhe yokuqala ngesikhathi i-18.
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngesikhathi ama-heroic e-Immobile emazingeni omusha akwazi ukuthola ukuthandwa kwakhe endaweni yakhona naye wahlupheka kakhulu kuze kube yilapho udumo luvutha umnyango lapho eqinisekisa ukuthuthela eTorino ngo-2013.
KwakuseTorino okungahambi kahle kahle kwaphuma ekujuleni kokunciphisa nokungafihli ngokufaka amagoli ekuqaleni kweqembu lakhe futhi lihlanganisa inani lezinhloso ze-23 ukusiza i-Torino ukuqeda i-7th ekupheleni kwesikhathi se-2013-2014 Serie A.
Imigomo yakhe ibalwa ukuthi yiyona ephakeme kakhulu kule nkathi ayizange ibone ukuthi iphumelele kakhulu i-Golden Boot ethanda kakhulu (I-Capocannoniere) kodwa wabamba ukunakekelwa kwabadlali abafuna ukuthola izinsizakalo zakhe kumaqembu aseYurophu. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ubuhlobo ukuphila
Emuva wonke umdlali waseNtaliyane ophumelelayo uyintombi noma i-wag ne-Immobile akuyona into ehlukile. Umhlukumezi omkhulu usebuhlotsheni obuhlala njalo Jessica Melena; a girlfriend and Model who became his wife.
Lo mbhangqwana wahlangana ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngesikhathi i-Immobile idlala iPascara. Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba bathandane ngokujulile ukuthi uJessica kwadingeka ashiye izinto ayezibonile ngaphambili, iqiniso laveza ngesikhathi sokuxoxisana lapho ephawula ukuthi:
Ngenxa ye-Immobile, ngishiye, family and my roots. His love was like a tusunami that swept what used to be my former life and ushered me into new beginings.
Ekhuluma ngalokho okwenze ukuthi ahambe othandweni nasezenzweni eziholela emshadweni wabo ngo-17th ka-May 2015, uJessica wathi uyathinteka ezinye izici zobuntu bakhe kuhlanganise nesifiso sakhe esingathandeki sokumkhipha umfazi.
Umshado wesibhangqwana ubusiswe ngamadodakazi amabili, kodwa, akuphiki ukuphika ukuthi ubaba othandanayo ufisa ukuba nomfana njengoba umkakhe eveza:
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Tattoos yobuciko
Abaningi Abadlali baziwa ukuthi bagqoke ubuciko bomzimba abane-cryptic undertones kodwa i-tattoo ye-Immobile yiyona ekhuthaza lokho abantu abakuthandayo ngemva kwesikhungo somshado: ukwakha umndeni onothando. Ubeka tattoo ngezansi njengoba 'Ijuba liyi-la vita ne-amore non finisce mai.' okuhunyushwa 'Lapho ukuphila kuqala futhi uthando alupheli.'
Ngaphambi kokuba i-tattoo engenhla i-Imobbile isetshenziswe ukuba ibe nobuciko obuningi bomzimba wendodakazi yakhe yokuqala uMikhela ngakwesokunene sayo.
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Umlutha kumageyimu wevidiyo
Abaningi bebhola bezemidlalo benza umsebenzi wokuzilibazisa ngokudlala imidlalo yevidiyo kepha bambalwa kakhulu bathola ukuzilibazisa kwabo okubanjwe ekugqilazweni njenge-immobile obonakala sengathi banomthamo omkhulu wokudlala i-FIFA17.
Ukunakekelwa kwadonsela ku-Immobile's addiction ngo-Okthoba 2016 ngenkathi umkakhe, uJessica Melina, ebhala i-video ekhasini lakhe le-Instagram ukuze adalule ukuthi yiziphi eziningi eziye zachaza ngokuthi izingozi ze-FIFA17.
Le vidiyo yathatha uJessica ezama ukunaka umyeni wayo owayeyifake ngokuphelele. Kungase kuzwakale ibuza ukuthi "Ukuziphendulela wenzani?" Kodwa i-Immobile yayigxile kakhulu emdlalweni ukuze iqaphele ukuthi yayikhona lapho!
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Wake wahlaselwa
I-Immobile yacishe igwetshwe ngoJulayi 2018 ngumdlali oshaywayo weqembu eliphikisana nePercara ngesikhathi ephumula ogwini kanye nomkakhe namadodakazi amabili. Kodwa-ke, abalandeli bezulu baphuthuma usizo lwe-Immobile ngenkathi amaphoyisa ahlomile eshukunyiswa ngesenzo ngokubopha ummese ophethe ummese.
Ukuthuthukiswa kwaveza ukunakekelwa kwezwe emhlabeni ukuthi abalandeli abanobuhlungu nabanamalungu amaqembu aphikisanayo angathatha kanjani imiphumela yemidlalo yebhola, umbono ubanjwe nomnikazi wesitolo sokudlela esiseduze nolwandle.
"Angazi umhlaseli. Lona uhlobo lwesigameko esenzeka lapho abantu benikeza ukubaluleka okubaluleke kakhulu ekuthembekeni kwebhola. "
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila komuntu siqu
I-immobile ngumdlali onqume ukuthi angayeka lutho ukuze azibonakalise njengelona elihle kakhulu. Lokhu kubonakala ekufikeni kwakhe okuthakazelisayo ngefomu eliphezulu lokufaka amagoli lapho abaningi bebheka ukuthi umsebenzi wakhe wezemidlalo ukhula.
Ngaphezu kwalokho, naye uzizwa isidingo sokuzungezwe uthando oluvela emndenini nobuhle obuvela kumkakhe.
Ngokuqondene nobuthakathaka bakhe, ukungahambi kahle kungahle kube nenkani, umhawu futhi ungahambi kahle. Ngaphezu kwakho konke, u-artistic, uthanda uthando futhi unomoya.
I-Ciro Immobile Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Akuyona nje inombolo yehembe
Ngesikhathi abanye abadlali bebhola beba nezinombolo ezibonisa izindima zabo emkhakheni lapho bedlala inombolo ye-17 ku-shirt Leonardo Bonucci ihamba ngaphezu kwemisebenzi kanye nesabelo. Inombolo ibhekisela ngosuku lokuzalwa komkakhe uJessica Melena, owazalwa ngoJulayi 17, 1990. Yingakho ehlala ezama ukwenza inkampani ibonakale ngejerseys depictipang inombolo ehlonishwayo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Ciro Immobile Childhood Story kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Football Football Diary
I-Juve Football Diary
I-Lorenzo Pellegrini Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-Federico Bernardeschi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts
Gianluigi Donnarumma Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-Nicolo Zaniolo Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Francesco Totti Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
I-Alex Sandro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Alvaro Morata Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe
I-Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts